Shiinaha Soo -galitaanka Caadiga ah ee 55 Midabood Ma laha summad gaar ah oo dhalaalaysa Warshadda dhaldhalaalka faruuryaha | Weiti
Caadada Imaanshaha Cusub 55 Midab No Summad Gaarka ah Dhalaalka Cad ee Faruuraha
1. Midabka dhaldhalaalka dibnaha dhalaalaya waa mid aad u qurux badan oo bixiya midabyo hodan ah. Dusha matte ayaa ku habboon xirashada maalinta oo dhan iyada oo aan la qalajin.
2. Koobku waa mid aan dheg lahayn oo ma libdhayo.
3. Biyo-la'aan muddo dheer jirta, si sahlan loo isticmaalo saliidda nadiifinta dibnaha si meesha looga saaro.
4. Waxaa laga sameeyay maaddooyin dabiici ah, oo ku habboon dhammaan noocyada maqaarka, oo ay ku jiraan maqaarka xasaasiga ah.
Waar dheer: Qalabkan dhaldhalaalka ah ee dareeraha ah wuxuu leeyahay midabyo ku dhegi doona bushimahaaga muddo dheer
Koob aan dheg lahayn: Haddii ay jirto xaflad ama taariikh, waxaad ka fogaan kartaa xaaladaha ceebta iyo inaad ahaato qof xarrago leh.
Midabo badan: dusha sharoobada oo cad, midab dhalaalaya oo u gaar ah
Caafimaad qaba oo dabiici ah:Ereygan dibnaha dhalaalaya wuxuu ka samaysan yahay maaddooyin ammaan ah sida shinnida iyo saliidaha lagama maarmaanka ah. Kiimiko-la'aan, caafimaad leh, aan sun ahayn, waarta, soo jiidasho leh oo qurux badan.
Hadiyad kaamil ah: Sidoo kale waa hadiyad weyn oo loogu talagalay Halloween, Kirismaska, Maalinta Jacaylka, dhalashada, sannad -guurada arooska, xafladda qoob -ka -ciyaarka, bandhigga qurxinta, hadiyadda qalin -jabinta, iwm.
La tasho hadda
BISHA GLOSS X MALOOYIN BADAN
Tubbada dhalaalka dibnaha iyo sanduuqa baakadaha dibadda labadaba waxaa lagu hagaajin karaa astaantaada.Waxaan leenahay warshad noo gaar ah si aan u soo saarno gloss dibinta.Waxaan dammaanad qaadi karnaa tayada alaabta.
Qalab qurxoon oo habboon oo qurux badan, oo si fudud loogu fulin karo midab cajiib leh. Dibnahaaga qoyso oo raaxo sii waqti dheer. Qurxinta waxay u egtahay mid ku habboon dhammaan xilliyada, gaar ahaan, haasaawaha, dukaamaysiga, xafladda xagaaga saaxiibbada.
Saddex Qodob oo Muhiim ah
Abuur dhalaal dabiici ah
Matte dibnaha dhalaalaya, dhadhan badan
Midabada ayaa dhalaalaya oo buuxa
Maaddooyinka qoyan, daryeel dibnaha jilicsan
Muujinta Midabka Tijaabada
Sawir Qaabkii Faruuraha Ee Wanaagsan
Codso lipstick oo isticmaal qalin dibnaha si aad u qeexdo qaabka dibnaha hoose
Ka buuxi dibinta hoose qalin qalin-bar-booska
Codso lipstick oo isticmaal qalin dibnaha si aad u qeexdo qaabka dibinta sare
Kaliya ku buuxi bushimaha oo dhan lipstick
Hore: Naas -nuujinta Caadiga ah ee Midabaynta Lipstick Water Light Moisturizer Lip Gloss
Xiga: Customize No Logo Samee Iskudhiskaaga Dhaldhalaalka Label Gaarka ah Faruura Lip Gloss
Gloss Lip Custom
Lipstick Liquid ah
Dhalo -dhalaalka jumlada
Matte Velvet Lip Gloss Non-Stick Cup Ma T ...
Liisaska Liquid Dhadhan leh ee Iibinta Kulul ...
Iibiyeyaasha Indhaha, Kordhinta Indhaha, jeedal mink, dibinta, indho -dejiye, Jeexa indhaha,